फलेबास नगरपालिकाप्रति नगरबासीको आक्रोश | Sarathi News
फलेबास नगरपालिकाप्रति नगरबासीको आक्रोश
January 21, 2020 | 8:22 pm
पर्वत, माघ ७–फलेबास नगरपालिकाप्रति सामाजिक सञ्जालमा तिब्र बिरोधका स्वर देखिएका छन् । ग्रिन फलेबास र क्लिन फलेबासका नाममा पुराना धार्मिक महत्वका बर, पिपल चौतारी मास्ने अभियान चालेको, सम्बन्धित ब्यक्तिलाई नसोधी रुख बिरुवा, फलफुलका बिरुवा नोक्सान पु¥याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फलेबास नगरपालिकाप्रति त्यहाँका नागरिकले तिब्र असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
हेर्नुहोस सामाजिक सञ्जालबाट जस्ताको त्यस्तै ।
पर्बतको फलेबास नगरपालिका अहिले बहुलाएको छ, त्यहाँ सदाका लागि अपुरणीय बर्बादी हुँदैछ । पूराना धार्मिक महत्वका वर पिपल र चौतारी, घरपरिसर भित्रका सयौं वर्ष पुराना, सबै प्रजातिका हजारौं, लाखौं रूख बुट्यानहरू काटेर क्लिन र ग्रीन फलेबासको नारा फलाक्दै पर्यावरण बिनास मात्र हैन, ग्रामीण ईतिहास, भूगोल नै मास्न लागेको मूर्खता देखिदैछ । हजारौं वर पिपलका र अन्य पुराना रूखहरू प्रति सामूहिक पागलपनको प्रदर्शन एवं निर्मम ब्यवहार गर्दै जबरजस्ती ढालिएका छन्, ढालिदै छन् । यस्तो हुनुमा दाउरा तथा काठका स्थानीय ब्यापारी र स्थानीय नेताहरू बीचको अनैतिक भ्रष्ट गठबन्धन हुनैपर्छ ।
वर र पिपलको रूखको महत्व र ती हुर्काउने, रोप्ने कैयन अघिका परोपकारी पुर्खाहरूको अपमान गर्न तम्सने ती नेपाल आमाको कुलंगार सन्तान हुनुपर्छ । तिनीहरू गाउँघरको संस्कृति, मान्यता, धर्म, परम्परालाई मासेर, बेचेर, पैसा कमाउने दाउमा लागेका हुन् । यसमा वन बिभाग चुप बस्नु अर्को रहस्य हुन पुगेको छ । फलेबास धेरै बौद्धिक, बुद्धिजीबी जन्माएको नेपालको महत्वपूर्ण गाउँ हो । तर त्यही गाउँमा नै नेताहरूबाट माफियाहरुको गठबन्धनमा प्रकृतिमाथि यसरी दिन दहाडे बलात्कार हुँदैछ र तिनको अगाडी सबै जनता मुकदर्शक र निरीह बनेको देखिनुले आत्मा मरेको फलेबास सिद्ध भएको छ । जुन कुरा मानिसको जिवन कालमा पुनः गर्न सक्नुहुन्न् । त्यो मास्ने कामगर्ने अधिकार कसैमा छैन । त्यस्ता आपराधिक कुकर्मीमाथि कडा सजाय हुनै पर्छ । बेप्रबाह हजारौं रूख बुट्यान काटिसकिएको छ र त्यो क्रम वनको डढेलोसरी फैलदै छ । काटिएका काठ दाउरा तस्करी भइसकेको छ ।
पर्वतको फलेबासमा ’क्लिन फलेवास ग्रिन फलेवास’ को कलुषित नारा दिएर पोहोर सालबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । पछि त्यसलाई हरियो र सफाइ मात्र होइन भनी व्यापक दायराभित्र मानिसको आनीबानी र आयआर्जन समेत पर्छ भन्दै व्यापक तालिमहरु कार्यक्रम संचालित गर्दै, बजेट थप्दै गए । खुबै प्रचारप्रसार पनि गरियो । खासमा त्यो क्लिन ग्रिन फलेबास भन्ने स्पष्ट परियोजना भन्दा पनि एउटा षडयन्त्रको अभियान जस्तो हुदै गएको छ । नगरपालिकाले मनमानी जे जे गर्दै हिड्दै गयो, सबै यही बृहत कन्सेप्ट भित्रको कुरा हो भन्दै अर्थ्याउदै गरेर अहिले जथाभावी रुखहरू काट्नेसम्मको स्थितिमा पुगेको छ । बुट्यानहरू बढेर खेतीपाती भएन, घरबारी जोखिमा परे, घरगाँउमै बा‘दर बढे आदि आदि अबैज्ञानिक बिनाअध्ययन, सोध वा अनुसंधान, गलत नाराहरू दिदै बृहद रुख कटान अभियानमा पुगेका छन्। अहिले खेत वा घरबाट २५ मिटर सिमाभित्र रहेका सबै रुख हटाउने पनि आदेश जारी भएको छ। धमाधम रुख काटिएका छन्। काठ दाउरा तस्करी हुदैछ। मान्छे बाहिर भएको, ढोकाबन्द घर कम्पाउण्डमा समेत बिना सूचना घुसेर रुखहरू ढालिदिने र सो पापतको खर्च धनीसँग पछि असुल्ने भनिएको छ। नयाँ, पुराना, यो जात, उ जात नभनी सबै रुख एकै मेसोले काटिदै छन्, काटिएको छ। यसमा वन ऐनकानुनहरु बिपरित काम भएकोले रुख काट्ने र काट्न आदेश दिनेउपर कार्यवाही हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी नगरपालिकाको गलत, घातक अभियानको बिरोध पनि भइरहेको छ । यस्ता वन कानुन मिच्ने नगरपालिकाका पदाधिकारीहरू कानुनी दायरामा फस्ने पक्का छ। यस्तो नोक्सानी भइसक्दा पनि सरकार भने चुपचाप बसिरहदा अहिलेसम्म विभिन्न जातका पौराणिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, ऐतिहासिक वा भौगोलिक महत्वका सदियौं पुरानासमेतका हजारौं रुखहरु ढालिसकेर अपुरणीय क्षति पुगिसकेको छ। वातावरणमाथि जघन्य अपराध हुदैछ, तर राज्य टुलुटुलु कसरी हेरेर बसेको छ?
यस्ता रूख ढाल्ने जघन्य अपराधिक घटनाहरू स्थानीय सरकारहरूको नेतृत्वमा मुलुकभरि जारी देखिन्छ। मुलुक मरूभूमिकरण र मानव बस्न नालायक बन्ने त होईन भन्ने चिन्ता बढेको छ।
निजगढमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउन केही हजार रूख बुट्यान काट्न हुन्न दिन्नौं भन्दै चिच्याउनोहरू अहिले मुलुकभरि सदियौं पुराना महत्वपूर्ण करोडौं रूख काटिदा पनि चुप किन छन्? बिरोध गर्न कतैबाट फण्डिङ नआएर ती चूप रहेका त हैनन्?
यस्ता अबैज्ञानिक मूर्खतालाई सरकारले तुरून्त हस्तक्षेप गरिहालोस्। कानुनविपरित कामगर्ने अपराधी जनप्रतिनिधि उपर मुद्दा दायर गरियोस् । यस्तो अपराधमा सरकार मतियार बनेको संदेश नजाओस्।
फलोबास नगरपालिका पर्बत लगायत मुलुकभरि हुदै गरेको सयौं वर्ष पुराना वर, पिपल चौताराका रूख ढालेर इतिहा‘स मेटाउने उद्दत आपराधिक जघन्य बर्बादी, पागलपनका घटनाहरू तत्काल रोकियोस्।